Ch 5 Luke – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Lioka / Ch 5 Luke
5:1 Ary nitranga fa, rehefa nifanety ny vahoaka aminy, ka mba handre ny tenin 'Andriamanitra, dia nitsangana teo akaikin'ny farihy Genesaret.
5:2 Ary nahita sambokely roa nijanona teo anilan'ny farihy. Fa ny mpanarato efa niakatra teo, ary nanasa ny haratony.
5:3 Ary noho izany, niakatra ho teo amin'ny sambokely anankiray, izay an'ny Simon, dia nangataka azy mba mihemotra kely amin'ny tany. Ary nipetraka teo, nampianatra ny vahoaka avy any an-tsambokely.
5:4 Avy eo, rehefa nitsahatra niteny, dia hoy izy tamin'i Simona, "Hitarika antsika ho amin'ny rano lalina, ary hanafaka ny harato hahazoana hazandrano. "
5:5 Ary ho setrin'ny, Simona hoy izy taminy: "Mpampianatra, miasa mandritra ny alina, tsy nahazo na inona na inona. Fa ny teninao, Dia halefako ny harato. "
5:6 Ary nony efa nanao izany, dia fonosina toy izany copious maro ny trondro fa ny harato rupturing.
5:7 Dia nanamarika ny mpiara-miasa, izay teo amin'ny sambokely hafa, ka efa ho avy ny hanampy azy ireo. Ary dia tonga izy ka nofenoiny ny sambokely roa, ka izy ireo efa ho difotra.
5:8 Ary nony efa nahita Simona Petera izany, dia niankohoka tamin'ny tongotr'i Jesosy, nanao hoe:, "Mialà amiko, Tompo, aho, fa mbola olo-meloka. "
5:9 Fa talanjona izy nanarona azy, sy izay rehetra niaraka taminy, amin'ny ny haben'ny hazandrano izay azony.
5:10 Ary io no marina Jakoba sy Jaona, ny zanak'i Zebedio, izay mpiara-miasa amin'ny Simon. Ary hoy Jesosy tamin'i Simona: "Aza matahotra. Manomboka izao, no ho azonao ny olona. "
5:11 Ary rehefa nitondra ny sambokeliny teo an-tanety, namela ny zava-drehetra, dia nanaraka an'i Jesosy.
5:12 Ary nony fa, while he was in a certain city, indro, there was a man full of leprosy who, upon seeing Jesus and falling to his face, nangataka azy, nanao hoe:: "Tompo ô, raha toa ianao ka vonona, ianao mahay manadio ahy. "
5:13 And extending his hand, he touched him, nanao hoe:: "Mety Aho. Be cleansed.” And at once, the leprosy departed from him.
5:14 And he instructed him that he should tell no one, “But go, misehoa amin'ny mpisorona, and make the offering for your cleansing, just as Moses has commanded, ho vavolombelona ho azy ireo. "
5:17 Ary nony, tamin'ny andro anankiray, fa indray nipetraka, fampianarana. Ary nisy Fariseo sasany sy ny mpampiana-dalàna nipetraka teo akaiky teo, izay efa niala tamin'ny tanàna rehetra any Galilia sy Jodia sy Jerosalema. Ary ny herin'ny Tompo dia tao, mba hanasitrana azy.
5:18 Ary indro, ny lehilahy sasany nitondra am-parafara ny lehilahy anankiray mararin'ny paralysisa. Ary dia nitady fomba iray hitondrana azy amin'ny, ary ny hametraka azy teo anatrehany.
5:19 Ary satria tsy nahita ny lalana izay hampidirany azy izy amin'ny, noho ny vahoaka, dia niakatra ho any amin'ny tampon-trano, ary dia aoka izy teo amin'ny tafo taila amin'ny am-pandriany, ho eo aminy, teo anatrehan'i Jesosy.
5:20 Ary satria nahita ny finoany, hoy izy:, "Man, voavela ny helokao. "
5:21 Ary ny mpanora-dalàna sy Fariseo dia nanomboka nieritreritra, nanao hoe:: "Iza io, Izay miteny ratsy Ity? Iza no mahavela heloka, afa-tsy Andriamanitra irery ihany?"
5:22 Fa Jesosy saina ny eritreriny, mamaly, dia hoy izy taminy: "Inona no mieritreritra ao am-ponareo?
5:23 Iza moa no moramora kokoa ny manao hoe: 'Voavela ny helokao,Sa ny manao hoe, 'Mitsangàna, ka mandehana?'
5:24 Fa mba ho fantatrareo fa ny Zanak'olona manana fahefana eto ambonin'ny tany hamela heloka,"Dia nanao tamin'ilay mararin'ny paralysisa, "Lazaiko aminareo amin'ny: Mitsangàna, betao ny fandrianao, ka mandehana ho any an-tranonao. "
5:25 Ary tamin'ny indray mandeha, eny, nifoha eo imasony, dia nitondra ny farafara izay dia natory, ka dia lasa ho any an-tranony, nankalaza an'Andriamanitra izy.
5:26 Sady talanjona nihazona ny rehetra, ary izy ireo nankalaza an'Andriamanitra izy. Dia raiki-tahotra indrindra, nanao hoe:: "Fa efa nahita fahagagana amin'izao andro izao."
5:27 Ary rehefa afaka izany,, dia nivoaka, ary nahita mpamory hetra atao hoe Levy, nipetraka teo amin'ny fomba amam-panao birao. Ary hoy izy taminy:, "Araho aho."
5:28 Ary nony niala tany ao ambadiky ny zava-drehetra, eny, nifoha, dia nanaraka Azy.
5:29 Ary Levy nanao fanasana lehibe ho azy tao an-tranony. Ary nisy vahoaka betsaka ny mpamory hetra sy ny olon-kafa, izay nipetraka nihinana teo aminy.
5:30 Fa ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna dia nimonomonona, nanao tamin'ny mpianany, "Nahoana ianareo no miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota?"
5:31 Sy ny fandraisana andraikitra, Hoy Jesosy taminy:: "Tsy izay tsara no mila dokotera, fa ireo izay manana aretina.
5:32 Tsy avy hiantso ny marina, fa ny mpanota mba hibebaka. "
5:33 Fa hoy ireo taminy:, "Nahoana ny mpianatr'i Jaona mifady hanina matetika, ary mivavaka, ary ny an'ny Fariseo manao zavatra toy izany koa, raha ny anao kosa mihinana sy misotro?"
5:34 Ary hoy Izy taminy:: "Ahoana no hahatonga ny zanaky ny mpampakatra amin'ny fifadian-kanina, raha ny mpampakatra dia mbola miaraka aminy?
5:35 Fa ho avy ny andro, rehefa ny mpampakatra dia halaina aminy, ary avy eo dia hifady hanina, tamin'izany andro izany. "
5:36 Ary izy koa nanao fampitahana ho azy ireo: "Fa tsy misy olona sews ny Patch avy lamba vaovao efa ela teo akanjo. Raha tsy izany, izy roa disrupts ny vaovao, ary ny Patch nalaina tamin'ny vaovao dia tsy hiaraka iray miaraka amin'ny antitra iray.
5:37 Ary tsy misy olona manisy divay vaovao no anaty siny hoditra tonta. Raha tsy izany, ny divay vaovao ny siny hoditra ruptures, ary dia harotsaka, ary ny siny hoditra, dia ho very.
5:38 Fa tsy, ny ranom-boaloboka hatao ao anaty siny hoditra vaovao, izy roroa.
5:39 Ary tsy misy olona izay misotro ny taloha, Tsy ela dia maniry ny vaovao. Fa hoy izy, 'Ny ela no tsara.' "